भारत वार्ताबाट किन भाग्दैछ ? « Loktantrapost
भारत वार्ताबाट किन भाग्दैछ ?
१३ असार २०७७, शनिबार १४:३०
मेचीनगर । वार्तामा बस्न नेपालले गरेको पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकलाई शुक्रबार जानकारी दिए ।
नेपालले सीमा अतिक्रमणका विषयमा वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासलाई वेवास्ता गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ ।
गत कार्तिक यता नेपालले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई भारतले विभिन्न बाहनामा टार्दै आएको छ । सर्वे अफ इन्डियाले भारतको आठौं र नवौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा जारी गरे लगत्तै नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ प्रस्तावित वार्ता मिति घर्किएपछि मात्रै दियो ।
बैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएरै वार्ताको प्रस्ताव पठाउँदा पनि भारतले टेरपुच्छर नलगाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको कुरा आएपछि यो यो प्रमाणले त्यो क्षेत्र हाम्रो हो नभनी भारतका लागि के के कारणले महत्वपूर्ण छ भन्ने दलिल पेश गर्दै आएको देखिन्छ ।
महाकाली सन्धिताका नेपालमा राजदूत रहेका केभी राजनले ‘ब्रिटीशकालीन सन्धि र नक्सालाई लिएर विवाद गर्नु नै आवश्यक नभएको’ बताएका छन् ।
सुगौली सन्धि नै नेपालका लागि लालपुर्जा सरह भएको श्रेष्ठको भनाई छ । ‘हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन् तर यसको मतलब हामी ढुक्कैले तयारी नगरी बस्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो भूमि कब्जा गरेर बसेको उ भाग्न खोजे पनि हामीले तानेर वार्तामा ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’
सीमा अतिक्रमणको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूमा एक ठाउँमा देखिन्छन् । विवाद आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक गरेर सर्वदलीय सहमति जुटाए । संसद् सर्वसम्मतले संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो ।
जबकी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले नेपालको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा मोदीले प्रतिपक्षीलाई जानकारी नदिएको भनेर आलोचना गरेको छ ।
नेपालसँग कोरोना भाइरस महामारीपछि संवाद गर्ने बताएको भारतले चीनसँग भने तुरुन्तै वार्ता ग¥यो । भारत र चीनबीचको टकरावमा अमेरिका, बेलायतले मध्यस्थता गर्ने बताएका छन् ।
नेपालीलाई उत्तेजित बनाउने रणनीति
संविधान संशोधनको पक्षमा भोट नहालेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीविरुद्ध नेपाल विरोधीहरू नै लागेको एक कूटनीतिज्ञको आशंका छ ।
‘हेर्दा राष्ट्रवादी जस्तो देखिने तर भित्री रुपमा भारतलाई फाइदा पुग्ने गतिविधिको प्रतिक्षमा देखिन्छन’ उनी भन्छन्, ‘जसरी हुन्छ नेपालीहरू उत्तेजित भएर एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाउन भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ । कोरोना नभएको भए अन्धराष्ट्रवादीहरूले त्यस्तो हर्कत पनि गरिसकेका हुनसक्थे ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापा संवादहीनता भारतको पनि हितमा नभएको बताउँछन् । कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने उनको जोड छ । भारतमा राजदूत रहिसकेका पूर्वमन्त्री थापा भन्छन्, ‘मौनतामा आधारित अन्योल दुबै देशको हितमा छैन ।’